YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, March 09
9 March 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/i3jnpe82010 March9Yeyintnge Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/09/20100အကြံပြုခြင်း
ပန်းရံအလုပ်သမ ၂ ဦးထိုင်းရဲလိုက်ဖမ်းသဖြင့်ရေနစ် သေဆုံး
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင် ဖူးခက် ပင်လယ် ၊ ကမ်းပါသောင် ကမ်းခြေရှိ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုသို့ ယမန်နေ့ ညနေက ဒေသခံ ထိုင်းပုလိပ်များ ၀င်ရောက် ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးစဉ် ထွက်ပြေး သဖြင့် မြန်မာ အလုပ်သမ ညီအစ်မ နှစ်ဦး ရေနစ် သေဆုံး ခဲ့ရသည်။ ယမန်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခန့် က ပန်းရံဆိုဒ် နေအိမ် အတွင်းသို့ ထိုင်းပုလိပ်များ ၀င်လာသဖြင့် အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် မမြင့်မြင့်စမ်း မှာ ခြေဦး တည့်ရာ ထွက်ပြေးသည်။ ပါသောင်ချောင်းတွင် ရေနစ် နေသည်ကို မြင့်သော အစ်မ အရင်း ဖြစ်သူ အသက် ၂၀ အရွယ် မညိုညိုစမ်း က ချောင်းထဲသို့ ဆင်းဆယ်ရာ ညီမ နှစ်ဦး စလုံး ရေနစ် သေဆုံး ခဲ့ရသည်။
လောင်လုံမြို့ နယ်၊ အံဇေါက် ကျေးရွာနေ ဦးမြင့်သိန်း ၊ ဒေါ်မတင်ဝေ တို့၏ သမီးငယ် များဖြစ် ကြသည်။ ထိုမိသားစု အားလုံးမှာ ထိုနေရာတွင် အတူ နေထိုင် လုပ်ကိုင်စားနေကြ သူများ ဖြစ်ကြသည်။ အစ်ကို အရင်းဖြစ်သူ ကိုနောင်နောင်က“ ကျနော် အကြီးဆုံးပါ၊ ကျနော်တို့ မှာ ညီကို မောင်နှမ ငါးယောက် ရှိပါတယ်၊ ကျနော့် ညီမလေးတွေ ခုလို့ မသေသင့်ပဲ သေဆုံး ရတာ ထိုင်းပုလိပ်တွေကြောင့် သေရတာပါ။ ကျနော့် ညီမအငယ် မြင့်မြင့်စမ်း ရေနစ် နေတာကို ညီမ အကြီးမ ညိုညိုစမ်းက မမြင် နိုင်ဘူးလေ၊ ကိုယ့်ညီမ ဆိုတော့ ဆင်းပြီးတော့ ဆွဲတယ်။ ၂ ယောက်စလုံး ရေကူး မတတ်တော့ မသေသင့်ပဲ သေဆုံး ကြရတယ်။ ကျနော်တို့ ဘယ်ကျေ နပ်မလဲ၊ ဒါပေမယ့် သူတစ်ပါး တိုင်းပြည်မှာ ကျွန်လာခံ နေရတော့ ဘာမှ မတတ် နိုင်ဘူး” ဟုပြောသည်။
မျက်မြင် တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ကိုခိုင်သန်းက “လူနေတဲ့ တန်းလျားကို လာပြီး အလုပ် သမားတွေကို ၀င်ဖမ်း ပါတယ်။ ပုလိပ် ၉ ယောက်လောက် ရှိပါတယ် ၊ ကားက ၂ စီးပါ၊ လူ ၁၅ ယောက်လောက် ဖမ်းယူ သွားပါတယ်၊ မနက် ကတော့ ငွေပေးပြီး ရွေးလာကြလို ရောက်နေ ကြပါပြီ၊ စီမံချက်နဲ့ ဖမ်းတယ် ထင်ပါတယ်၊ ကလေးမလေး၂ ယောက် မသေသင့်ပဲ သေရတာပါ၊ ဆင်းကယ်မယ့်လူ တစ်ယောက်ကို ထိုင်းပုလိပ်က မင်း ဆယ်ရဲရင် ဆယ်ကြည့် သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ် မယ်လို့သေနတ်နဲ့ တေ့ထားတယ်ပြောတယ်၊ အဲဒီကလေးမ ၂ ယောက် နေနစ် နေတာကို အားလုံး မြင်နေ ရပါတယ်။ လုံဝ ရေနစ်သွားမှ ပုလိပ်တွေ ပြန်သွား တာပါ၊ တော်တော် ရက်စက် လွန်းပါတယ်” ဟုပြောသည်။
အလောင်း၂ လောင်ကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ပိုင်းတွင် ပါသောင် ပထိုးမြို့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တွင် မီးသဂြိုဟ် ပြီးစီး ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အသုဘ အခမ်းအနားသို့ အနီး ပတ်ဝန်း ကျင်မှ မြန်မာ အလုပ်သမားများ ၃၀၀ ကျော်ခန့် လာရောက်ခဲ့ ကြသည်။ အဆိုပါ ၁၃ ထပ် ပါသောင် ပန်းရံဆိုဒ်တွင် မြန်မာ အလုပ်သမားပေါင်း ၃၅၀ အထက်တွင် ရှိကြောင်း သိရှိ ရသည်။ ထိုပန်းရံဆိုဒ် အတွင်း ထက်ဝက် ကျော်ခန့် မှာ နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် လက်မှတ် လုပ်ထား ကြသော်လည်း ပုလိပ်နှင့် မဖြေရှင်းလို သဖြင့် အားလုံး လိုလို ထွက်ပြေး ကြကြောင်း အလုပ် သမားများက ပြောသည်။
အလားတူ ထိုင်းပုလိပ် လိုက်လံ ဖမ်းဆီး သဖြင့် ထွက်ပြေး သဖြင့် ကားတိုက် သေဆုံးမှု များနှင့် ရေနစ် သေဆုံး ရမှုများ ယခင်းက လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင် နှင့် အခြား နေရာ အတော် များများ တို့ တွင်လည်း ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ဖူးကြောင်း သိရသည်။
၉ . ၃ . ၂၀၁၀ l ဓါတ်ပုံ - ခိုင်အတ
သတင်း - ကိုကျော်သောင်း(ဘန်ကောက်)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/09/2010 1 အကြံပြုခြင်း
လွဲနေသော ဆုံမှတ် (သို့မဟုတ်) ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ
မင်းဟန် | အင်္ဂါနေ့၊ မတ်လ ၀၉ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၅၂ မိနစ်
နှစ်သစ်… တနှစ်ဆီသို့ ခြေချမိလေသည်မှာ ရက်ပေါင်း ၆၇ ရက်ရှိပြီ။
စစ်အစိုးရက သူ၏ နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံအဆင့် ၆ အရ .. ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတရပ် ကျင်းပမည်ဟု ဆိုသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ကျင်းပမည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့ ရက်စွဲနှင့် စစ်အုပ်စုက…
ဥပဒေအမှတ် ၁/၂၀၁၀ ဖြင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေ၊ ဥပဒေအမှတ် ၂/၂၀၁၀ ဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ၊ ဥပဒေအမှတ် ၃/၂၀၁၀ ဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ၊ ဥပဒေအမှတ် ၄/၂၀၁၀ ဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ၊ ဥပဒေအမှတ် ၅/၂၀၁၀ ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတို့ တန်းစီ၍ ထုတ်ပြန်လိုက်လေ၏။
ရွေးကောက်ပွဲဟူသည်က …. နိုင်ငံသားတိုင်း လွတ်လပ်၍ တရားမျှတစွာနှင့် ဆန္ဒမဲပြုခွင့်ရလျှင်… ပြီးမြောက်၏။ မခက်ခဲ….။ ရင်ခုန်စရာမရှိ….။ သို့သော်…. ပြုလုပ်ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲဟူသည်ကား…. မည်သည့် ‘မိုပုံစံ’ အတွက် ဦးတည်၍ ပြုလုပ်ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲနည်း…။ ဤသည်က ….အဓိကဖြစ်သည်။ လူထု၏ နှလုံးသွေးများ ဆူပွက်ဖွယ်ရာ အရေးဖြစ်၏။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲက…. မည်သည့် ‘မိုပုံစံ’ နည်း….။ စစ်အာဏာရှင် ကြီးစိုးမည့် မြန်မာ့လူဘောင်လား….။ သို့တည်းမဟုတ် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းလား….။
ဤအတွက်ကား… ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအား ကြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက … ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၏ ‘မို’….။
ပြီးလျှင် ….ဒုတိယတချက်က၊ ရွေးကောက်ပွဲဟူသည်တွင် ပုံမှန်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲဟူ၍ ၂ မျိုး ရှိ၏။ အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲက …. စနစ်ဟောင်းမှ စနစ်သစ်တခုသို့ ကူးပြောင်းမည့် ရွေးကောက်ပွဲများ ဖြစ်၏။ ဥပမာ…. ကိုလိုနီဘဝမှ လွတ်လပ်သည့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံသစ်သို့ ကူးပြောင်းသည့် ရွေးကောက်ပွဲမျိုး….။ ဤတွင်….. ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုလိုနီစနစ်၏ အရိပ်အငွေ့များ ကင်းစင်နေရမည်။ နိုင်ငံရေးဝန်းကျင်သဘာဝက လွတ်လပ်သည့် နိုင်ငံရေးရာသီရပ်ဝန်းအတွင်း ရှိနေရမည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲက …. အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲဟု ဆိုရမည်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်မှ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ကူးပြောင်းမည့် ရွေးကောက်ပွဲ….။ ဤအတွက် …. ၂၀၁၀ ခုနှစ်၏ နိုင်ငံရေးရာသီရပ်ဝန်းသည် ဒီမိုကရက်တစ် နိုင်ငံရေးရာသီဥတု ရှိနေရမည်ဖြစ်၏။
ဤ ၂ ချက်နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲဟူသည်ကား အကဲဖြတ် တိုင်းသွားရမည်ပင်…။ ထို ၂ ချက်က …. ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ၏ ‘လစ်တစ်မတ်’ စက္ကူများ…။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံသည်ကား ဘာလဲ…။ ဤသို့ပင် စ၍မေးခွန်းထုတ်ရမည်။ တကြောင်းတည်းနှင့် ဖြေရပါမူ …. ‘မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး၏ အနာဂတ်နိုင်ငံရေးတွင် ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှ တပ်မတော် ပါဝင်ရေး’ ဖြစ်၏။ ဤအဖြေအတွက် သက်သေပြချက်များကမူ …. ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ပုဒ်ထီး၊ ပုဒ်မများနှင့် ပြည့်ပြည့်သိပ်သိပ်ပင် ပါရှိ၏။ ပြပါမည်….။
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေး အကြီးအကဲများဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ၊ ဒု-သမ္မတများ၏ အဓိက အရည်အချင်းက … ‘စစ်ရေးအမြင်’ ရှိရမည်ဟူ၍ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပြဋ္ဌာန်း၏။ သဘောကမူ…. တပ်မတော်သား လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် တဦးသော်လည်းကောင်း၊ သို့တည်းမဟုတ် စစ်မှုထမ်းဟောင်းတဦးသော်လည်းကောင်း ဖြစ်ရမည်ဟု ဆိုခြင်း ဖြစ်၏။
အခြားသော… အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များက… တိုင်းပြည်အား အုပ်ချုပ်ခွင့် မရှိဟု ကန့်သတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။ နိုင်ငံသားတဦးအနေဖြင့် အရည်အချင်းကလည်း ပြည့်စုံ၊ လူထုကလည်း ထောက်ခံပါသည်ဆိုရုံမျှနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ဒု-သမ္မတတာဝန်များအား ထမ်းဆောင်ခွင့် မရှိ…။ စစ်သားဖြစ်မှ ရမည်။ စစ်သားဖြစ်ရန် လိုသည်ဟု သတ်မှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။ ပြီးလျှင် …. သမ္မတ ၃ ဦးတွင် တဦးသည် စစ်သားထဲမှ ဖြစ်ရမည်။ ထိုစစ်သားသမ္မတတဦးက သမ္မတကြီးလည်း ဖြစ်နိုင်၏။ အနည်းဆုံးမှာမူ …. သမ္မတ ၃ ဦးအတွင်း ဒု-သမ္မတဟူ၍ တနေရာတော့ ရယူထား၏။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ….ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ တိုင်း-ဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဟူ၍ ရှိ၏။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် …ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ၂ ရပ်အား ပေါင်းထား၏။
ထိုထိုသော …လွှတ်တော်တိုင်းတွင် ‘တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်မှ အမည်စာရင်းပေးပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်စေသည့် တပ်မတော်သားများက … ၂၅ % ပါဝင်’ ၏။
ကျန်သည့် ၇၅ % သော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကိုသာလျှင် နိုင်ငံသားများက ဆန္ဒမဲပေး၍ ရွေးချယ်ကြရမည်။ ဒီမိုကရေစီ၏ အနှစ်သာရဖြစ်သည့် အချုပ်အခြာအာဏာက… ပြည်သူလူထုထံမှ ၇၅ % သာ စီးဆင်းခွင့် ရှိနေသည်။ ထိုအထဲ၌ တပ်မတော်သား စစ်သည်တော်များကလည်း နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအရ မဲပေးခွင့်ကိုမူ ယူထားကြသေး၏။ ပြီးလျှင် …. လူထုမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ဝန်ကြီး၊ ဒု-ဝန်ကြီးတာဝန်များအား တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရပါက ….ထိုလူထုကိုယ်စားလှယ် ဝန်ကြီးသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ရမည်။ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များမှာမူ …. နုတ်ထွက်ရန်မလို….။ ဝန်ကြီးလည်း လုပ်၊ လွှတ်တော်လည်း တက်ခွင့် ရှိ၏။
ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေး၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ၃ ဌာန၏ ဝန်ကြီး၊ ဒု-ဝန်ကြီး နေရာများကိုမူ … တပ်မတော်မှသာ ယူမည်။ တပ်မတော်မှ ယူမည်ဟူသည်က …. တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်မှ အမည်ပေး၍ ခန့်အပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ…. ‘အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ’ ဟူ၍လည်း ရှိ၏။ ကောင်စီဝင် ၁၁ ဦးနှင့် ဖွဲ့သည်။ ကောင်စီဝင် ၁၁ ဦးတွင် စစ်တပ်မှလာသည့် ဒုသမ္မတ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ ဒု-တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ စစ်တပ်မှ ဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ထားသည့် စစ်သားဝန်ကြီး ၃ ဦး ဖြစ်သည့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ၃ ဦးတို့ ပါဝင်ကြ၏။ ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးတွင် စစ်တပ်မှ ၆ ဦး ပါဝင်ထား၏။ ‘အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ’ အတွင်း စစ်တပ်မှ Majority vote အား ရယူထားခြင်း ဖြစ်၏။
ပြီးလျှင် …‘အရေးပေါ်’ အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လျှင်လည်း စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းပိုက်နိုင်ခွင့်အား ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ဥပဒေအဖြစ် ထည့်သွင်းထား၏။ နောင်…. စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလျှင်က .. ဥပဒေအရ အာဏာသိမ်းခြင်းဟူ၍ ဖြစ်ရန် စီမံထား၏။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက …. နိုင်ငံတော် သမ္မတ ၃ ဦးတွင် စစ်တပ်မှ တဦး၊ လွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်တွင် စစ်တပ်က ၂၅ %၊ အဓိကျသည့် ဝန်ကြီးနေရာ ၃ နေရာတွင် စစ်တပ်မှ…။ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် စစ်တပ်မှပင် Majority vote အား ရယူ၏။ အရေးပေါ်အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လျှင်လည်း ဥပဒေအရ စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းပိုင်ခွင့်အား ပြဋ္ဌာန်းသည်။ မလွတ်…။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအရ…. ပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကား မည်သည့်ပုံ ပေါ်လေမည်နည်း….။ အဝေးကပင် မြင်နိုင်ပါသည်ဟု ဆိုရမည့်ဟန်…။
အစ္စရေးမှ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည့် ရှီမွန်ပဲရစ်၏ စကားကို အမှတ်ရမိ၏။
“၂၁ ရာစု အဝင်ဝမှာ လေး၊ မြားလက်နက် မလိုပါ”…. ဟူ၍ သူက ပြောသည်။
အစ္စရေးနိုင်ငံဟူသည်က …. အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် သေနတ်ကိုင်ပြီး ခံတုန်ကျင်းအတွင်း အမြဲနေကြရသည့် နိုင်ငံ….။ သွေးသံရဲရဲနှင့် သွေးမတိတ်သည့် နိုင်ငံ…။ ဤနိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်တဦးက ၂၁ ရာစုကမ္ဘာသစ်ကို ဤသို့ မှတ်ချက်ပြု၏။ လေးနက်စွာနှင့် ဆင်ခြင်စရာပင်….။
၂၁ ရာစုအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြေချမိသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တခုပင် ရှိပြီ။ နအဖ စစ်အုပ်စုကမူ …. လေး၊ မြားလက်နက် တပြင်ပြင်နှင့် လုံ့လထုတ်နေကြဆဲ….။
ဖနိဒါ | အင်္ဂါနေ့၊ မတ်လ ၀၉ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၀၆ မိနစ်
“ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာစာတမ်းမှာပါတဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လေးစားလိုက်နာရမယ်။ အဲဒီရလဒ်ကို တနည်းနည်းနဲ့ အသိအမှတ်ပြု ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး တောင်းဆိုချက်ကတော့ ဒီအတိုင်းပဲလို့ ပြောလို့ရမယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
အဓိက အတိုက်အခံပါတီ အန်အယ်ဒီက နေအိမ်ချုပ်ကျခံနေရသော ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန်၊ ၁၉၉၀ ခု ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို စစ်အစိုးရက တစုံတရာ အသိအမှတ်ပြုရန်၊ ၂ဝဝ၈ ခု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန်နှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရန် ဟူသော တောင်းဆိုချက်ကို ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာစာတမ်းဟူ၍ အမည်ပေးထားသည်။
တောင်းဆိုချက်အပေါ် စိတ်ဝင်စားဟန်မပြသော စစ်အစိုးရက ယနေ့တွင် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှတဆင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥပဒေ အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြပြီး နောက်ရက်များတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများကို ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်သည်။
ယခုထုတ်ပြန်သော ကော်မရှင်ဥပဒေက ၁၉၉၀ ခုနှစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေး ကော်မရှင်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။
သို့သော် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂ဝ တွင် အမတ်နေရာ ၄၈၅ နေရာအနက်မှ ၃၉၂ နေရာ အနိုင်ရရှိပြီး တနိုင်ငံလုံး မဲပေးခွင့် ရှိသူ၏ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထောက်ခံမှုရသော အန်အယ်ဒီ၏ ရလဒ်မှာ ပျက်ပြယ်သွားခြင်း မရှိဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
အာဏာလွှဲပေးခြင်း မခံရသော အန်အယ်ဒီပါတီ၏ အမာခံခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးကြောင့် ထောင်ထဲတွင် ၁၉ နှစ် နေခဲ့ရသူ ဦးဝင်းတင်က ယခင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိမှတ်ပြုရေး စစ်အစိုးရ၏ တုံ့ပြန်မှုကို မူတည်ရေး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရေး၊ မဝင်ရေး ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဟု ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားပေါင်း ၂၁ဝဝ ကျော်အနက် အန်အယ်ဒီပါတီဝင် ဦးရေမှာ ၄၃ဝ ကျော်ဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မဇ္ဈိမက ကြိုတင်လက်ခံရရှိထားသော နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပါ စကားရပ်ကမူ အကျဉ်းကျနေသူသည် ပါတီဝင် မဖြစ်ရဟု ကန့်သတ်ထားရာ ထောင်တွင်းမှ ပါတီဝင်များအတွက်လည်း ညိစွန်းနေသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေအတွင် ဥပဒေထွက်ရှိချိန်မှ ရက်ပေါင်း ၆ဝ အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမတ်နေရာ ၃ နေရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုလျှင် ပါတီဖျက်သိမ်းနိုင်သည်ဟု ပါရှိသည်။
စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေက အန်အယ်ဒီ၏ ၉ဝ ခုနှစ် ရလဒ်ကို ပယ်ဖျက်သလို အဓိပ္ပာယ်ဆောင်သည်ဟု ပြောလိုက်သူကတော့ ယခုနှစ်အတွင်း ပြုလုပ်မည်ဟု စစ်အစိုးရက ကတိပေးထားသော ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကချင်တိုးတက်သောပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတူးဂျာ ဖြစ်သည်။
“၁/၈၈ မှာ နဝတ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကော်မရှင်ဥပေဒေကို ဒီဥပဒေသစ်နဲ့ ချေဖျက်လိုက်ပြီပေ့ါ။ အန်အယ်ဒီ တောင်းဆိုနေတဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို ပယ်ဖျက်သလို အဓိပ္ပာယ်ဆောင်နေတာပေါ့” ဟု သူက ဆိုသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်သော မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီမှ ပြောခွင့်ရှိသူ နိုင်တင်အောင်ကမူ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥပဒေ ထွက်လာပြီမှန်သော်လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးရန်နှင့် ၂ဝဝ၈ ခု ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုလည်း ပြန်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရန် လိုနေသေးကြောင်း တောင်းဆိုလိုက်သည်။
“လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှု လုပ်ပြီးမှသာလျှင် ကျနော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ စဉ်းစားမယ်လေ။ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်ဆိုရင် အခြေခံဥပဒေကို ဒီမိုကရေစီ စံညွှန်းနဲ့အညီ မပြင်ဆင်ဘဲနဲ့ ဆက်သွားလို့ မဖြစ်ဘူး။ အများက လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ပြီးခါစတွင် ဟန်ပြဆန္ဒခံယူပွဲ ပြုလုပ်အတည်ပြုခဲ့သော အခြေခံဥပဒေအပေါ် ပြည်တွင်းပြည်ပ အတိုက်အခံများက စစ်အုပ်စု၏ အုပ်ချုပ်မှုကို တရားဝင်မှုပြုရန်သာ ဖြစ်သည်ဟု ပြက်ရယ်ပြုကြသည်။
ဲပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးသမားများသို့ သံဃာတော်များမှ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ရက်စွဲ ။ ။ ၇ - ၃ -၁၀
ရန်ကုန် အလုပ်သမား ဆန္ဒပြဦးရေ ထောင်နဲ့ချီတိုးလာ အချိန်မှာ ပြည်ပရှိ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ချို့ဟာ သူရဲ့ ပြဿနာပေါင်စုံကို ဖြေရှင်းချက်တွေ ထုတ်နေတာကို ဦးဇင်းတို့တွေနေရတော့ အတော့်ကိုစိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ် တိုင်းပြည်ကို တစ်ကယ်ချစ်ရဲ့လားလို့ မေးချင်းပါတယ်။ ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက် ဒုက္ခရောက်နေတယ် ဆိုတာကို အားလုံးသိကြရဲ့လားလို့တွေးနေမြိ
ပီး ပြည်ပမှာ မိမိကိုယ်နိုင်ငံရေးသမားလို့ အမည်ခံထားတဲ့သူတွေရဲ့ ပြည်တွင်းက သူတို့မိသားစုတွေ မပါလို့လား ထင်နေမိပါတယ် အမှန်းဆိုရင် အခုချိန်မှာ တိုင်းပြည် အတွက် အမှန်တရား အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ သူတွေမှာ လုပ်ရမယ် အလုပ်တွေဟာ ပြုပြင်ပြောင်လဲရေးအတွက် အလုပ်ရမယ်အချိန်ပါ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ဦးဇင်းတို့ သံဃာတွေ အနေနဲ့ အမှာစကားပါးချင်တာကတော့ အခုချိန်မှာ ရှင်းစရာရှိရင်လည်း ခဏရပ်ထားပြီး တိုင်းပြည် ဂျောက်ထဲကျမည်အရေးကို ဦးစားပေးစဉ်းစားကြပါလို့ ဦးဇင်းတို့က မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ။
အခုဆိုရင် မြန်မာပြည်က အလုပ်သမား ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ယခုအချိန်မှာ အလုပ်သမားတွေနဲ့ အတူလက်တွဲပြီး စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ဝိုင်းဝန်းပြုတ်ချရမယ့် အချိန်ဆိုတာ အားလုံးနားလည်ဖို့ သင့်ပါတယ် အခုဆိုရင် အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ နေ့စဉ်ရက်စက်သူတို့ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို တောင်းဆိုလာကြတာ ကျေနပ်အားရစရာ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ ပြည်ပမှာကတော့ ငါ့ကဘာလုပ်ခဲ့တာ သူကတော့ ဘာတွေလုပ်တာနဲ့ အချိန်တွေကုန်နေတာ တွေရတော့ အတော့်ကိုယ် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ် ။
အမှန်တစ်ကယ် ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ချင်ရင် တိုင်းပြည်ကို စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်က လွတ်မြောက်အောင် အရင်ဆုံးလုပ်ပြီး ဖြေရှင်းကြပါ ယခု အချိန်ဟာ ပြည်ပရောက်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ ကြေငြာချက်ထုတ် ရုံလောက်နဲ့ မရတော့ပါဘူး အများစုပါဝင်နိုင်တဲ့ တွေ့ဆုံးဆွေးနွေးရမယ့် အချိန်ပါ ပြည်တွင်းပြည်ပ ကွန်ယက်တွေကို တည်ဆောက်ရမယ် အချိန်ဆိုတာ ကိုယ်ကိုနိုင်ငံရေး သမားလို့အမည်ခံထားတဲ့ သူတိုင်းရဲ့ဦးနှောက်မှာ ထည့်ရမယ် အချိန်ဆိုတာ အားလုံးနားလည်ဖို့ သင့်ပါတယ်။
မိမိတို့ အတွက်နဲ့ ပြည်သူတွေ စိတ်ညစ်ရမယ့် အလုပ်မျိုးကို မလုပ်ကြပါနဲ့ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်က အမှန်တရားအတွက် ပြည်သူအတွက်ပါလို့ပြောပြီး မိမိတို့ရဲ့ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ် အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို ဒီချိန်မှာမရှင်းကြပါနဲ့ တစ်နေ့ကျရင် သမိုင်းတရားခံဟာ ဘယ်သူတွေလည်းဆိုတာ ပြည်သူတွေက သိပါတယ် ဘယ်သူကတော့ ဘာလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြီး အပြစ်ဖို့နေမယ့်အစား ဒီမိုကရေစီ အရင်ရအောင်လုပ်ကြပါ။ ဒီမိုကရေစီရလာရင် သမိုင်းကိုထောက်ပြပေးမယ် ပြည်သူတွေ ရှိပြီးသားပါ။ ၂၀၀၇ခုနှစ်က သံဃာတော်တွေဟာ ဘယ်သူမှာ မလုပ်ရဲ့တဲ့ အလုပ်တွေကို ငြိမ်းစွာ လုပ်ပြခဲ့ပြီးပါပြီး ထပ်ပြီးတော့လည်းလုပ်နေကြပါတယ် ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးသမားတွေ အနေနဲ့ သံဃာတွေနဲ့ လက်တွဲကြပြီး အဖြေရှာကြပါ ။
ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ အားလုံးကိုလည်း ပြောချင်တာကတော့ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင် ညီညွတ်ရေးကိုလိုချင်ရင် အားလုံးပြောင်းလဲပစ်ဖို့ လိုပါ
ပြီ။ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်ရေးကို လွတ်လပ်စွာ တောင်းဆိုနေတာကို ဦးဇင်းတို့ သံဃာတွေ အနေနဲ့ အပြည့်ဝထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပင်မဲ့ အခုအချိန်မှာ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ပြုတ်ချရေးဟာ ပိုပြီးအရေးကြီးနေပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ညီညွတ်ရေးဟာ ပထမတန်းမှာ အရေးကြီးကြောင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြောခဲ့ကြပြီးပါပြီ အခုလည်း ဒီစကားတွေကို ပြောနေရတော့ ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ အတော်ကိုရှက်မိပါတယ် ကလေးတွေဆိုရင် တစ်ခါပြောပြီးရင် မှတ်မိပါတယ် မြန်မာစကားပုံကို မေ့နေကြလို့လားတွေးမိပါတယ်၊ မေ့သူတွေ အတွက်ထပ်ပြီး သတိပေးလိုက်ပါတယ် ညီညွှတ်ရေးဟာ ပထမတန်းမှာအရေကြီးပါတယ် ညီညွှင်္ွှတ်မှုမရှိရင် ဘယ်လောက်ပဲ ဒီမိုကရေစီ လုပ်မယ်လို့ ပြောနေပါစေ အောင်မြင်မှု့ဆိုတာ မရနိုင်ပါဘူး။
အခုချိန်မှာ သံဃာတော်တွေ ခေါင်းဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်မှာလား ပြည်ရောက်နိုင်ငံရေးသမားတွေက ခေါင်းဆောင်ပြီးလုပ်မှာလားဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိလာပါပြီ စစ်အာဏာရှင်တွေက ၂၀၀၈ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေကို တည်းပြုပြီးပြီဆိုတာ အားလုံးသိပါတယ် မကြာခင် ၂၀၁၀ ရွှေကောက်ပွဲကို ပြုလုပ်တော့မယ် အချိန်ဟာ နီးကပ်နေပြီ ဆိုတာကို သိလျှက်သားနဲ့ မိမိတို့ အတ္တ၊ ကိုယ်အကျိုးအတွက်ပဲ လုပ်နေကြတာတွေ့ရတော့ ဦးဇင်းတို့ သံဃာတွေအနေနဲ့ အထူးပင် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။
ဦးဇင်းတို့ အဓိက ပြောချင်တာကတော့ အခုလက်ရှိ ဦးဇင်းတို့ မြန်မာပြည်အခြေအနေကို ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် အခြေအနေက မပြောင်းလဲသေးတော့ ပိုပြီးတော့ ဆိုးလာတယ်။ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ အရမ်းဒုက္ခခံရတယ်၊ ဆင်းရဲတယ်၊ အဲသလိုပြန်ကြည့်ရတဲ့ အခါမှာ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေရော ပြည်ပမှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေရော လူကြီးတွေနဲ့ အတူတွဲပြီးတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြောင်းလဲမှု့ တခုခု ဖြစ်လာနိုင်အောင် ဦးဇင်းတို့ အကုန်လုံး ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ရမှာ၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ မွန်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်းဖြစ်ဖြစ် အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ ကျန်တဲ့လူမျိုးစုတွေနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ ဦးဇင်းတို့လုပ်ဆောင်ရမယ်၊ စစ်အာဏာရှင်ကို အမြန်ဆုံးကျဆုံးသွားအောင် လုပ်ဆောင်ရမယ်။
တကယ်တမ်း လောကမှာ အရေးအကြီးဆုံးက ဖြူစင်တဲ့ရရိုးသားမှုသာ ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက် နားလည်သူ ရှားပါတယ်… မိမိပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှာဖွေကြည့်ရင် ရုပ်လှသူနဲ့ မလှသူကို အလွယ်တကူ ခွဲခြားလို့ရနိုင်ပေမဲ့ ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ စိတ်ထားရှိသူကိုတော့ ရုတ်တရက်ခွဲခြားတွေ့ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး…. ဒါကြောင့် တကယ် အလှစစ်နဲ့ လှတဲ့သူကိုသေချာ ရှာတတ်ဖို့ လိုပါတယ်…..အပေါ်ယံ ရုပ်ရည်ကိုသာကြည့်ပြီး ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ တကယ့်အလှစစ်ကို တွေ့ဖို့ဝေးနေဦးမှာပါ… ကိုယ့်ဘေးမှာ ရှိနေပါလျှက်နဲ့ ရုပ်မလှလို့ ဂရုမစိုက်မိတဲ့ ဖြူစင်ရရိုးသားတဲ့ နှလုံးသားအလှ ပိုင်ရှင်လေးများကို လက်လွှတ်မသွားခင်၊ နောက်မကျခင်မှာ သေချာ ရှာဖွေကြပါလို့ အကြံပြု လိုက်ပါရစေနော်… ရုပ်အလှ ပြည့်စုံသူများလည်း၊ စိတ်နှလုံးအလှပါ ထပ်ဆောင်းလို့ အလှဆုံးသော သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ….......... အမှန်
တရားစစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ နိုင်ကြပါစေ…......။
တော်လှန်းရေးသစ္စာဖြင့် စာရေးသူအရှင် (ဖျာပုံ) ပြည်တွင်းတစ်နေရာ ဆရာတော်သံဃာတော်များရဲ့ ဆန္ဒအရ ရေးသားချင်းဖြစ်ပါတယ် တိုက်ခိုက်လိုသော ဆန္ဒအရ ရေးသားချင်းမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာကိုဝန်ခံရင်း တပည့်တော်အနေနဲ့ အရင်တောင်းပန်ပါတယ် ဘုရား။
2010 SPDC Union Election Commission Law
http://ifile.it/kabxm4q2010 03 08 - Union Election Commission Law
N.B. Unofficial translation
Please give your spare time to visit :www.taungzalatnews.blogspot.com
ပန်းရံအလုပ်သမ ၂ ဦးထိုင်းရဲလိုက်ဖမ်းသဖြင့်ရေနစ် သေ...
ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာစာတမ်းကိုပင် ဆုပ်ကိုင်မည်ဟု ဦးဝင...
ဲပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးသမားများသို့ သံဃာတော်များမှ ...